လှိုင်သာယာအထည်ချုပ်စက်ရုံအလုပ်သမားများအားစာနာမိခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » လှိုင်သာယာအထည်ချုပ်စက်ရုံအလုပ်သမားများအားစာနာမိခြင်း
Posted by shwe tallatr on May 28, 2012 in Complaint / Claim | 15 comments
အကျွနှုပ်တို.ရန်ကုန်မြို့ရှိလှိုင်သာယာစက်မှုဇုံမှ လက်လုပ်လက်စား အလုပ်သမားများဘ၀အားကြားသိရသောအခါ လုံးဝစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသည်။ နိုင်ငံခြားသားကမြန်မာအလုပ်သမများကို ရိုက်နှပ်ခြင်းမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါ၊ ထိုကိစ္စကိုဆိတ်ဆိတ်ငြီမ်နေသောအထက်လူကြီးများကိုလည်း ရွံရှာမိပါသည်။ ထို.ကြောင့်ယ္ခုလိုကိစ္စနောက်မဖြစ်ရပဲနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များကို အလုပ်သမားများမှသင်ခန်းစာပေးခြင်းကို ကျနော်တင်ပြပေးချင်ပါသည်။
၁၉၇၀-၇၅ နောက်ပိုင်းကာလတုန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများကြားပဋိပက္ခ အကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျနော်တို.နိုင်ငံမှာ
ဖြစ်သလိုပဲအခြေခံလုပ်အားခ လုံလောက်စွာမရရှိခြင်းမှစကာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို.နောက်အလုပ်သမားအများစုက အလုပ်ရှင်ရဲ့ လုပ်ငန်းမှန်သမျှကိုထော်လော်ကန့်လန်.တွေကြီးလုပ်ပြခဲ့ပါသည်။ ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုရင်ဗျာ ဥပမာအထည်ချုပ်စက်ရုံဆိုပါတော့-အလုပ်သမားတွေက
အထည်တွေကိုတလွဲချုပ် ၊အထည်လိပ်တွေကိုဖျက်စီးပြစ်တယ်၊ဈေးကွက်ထဲမ၀င်အောင် အထည်တွေကိုချုပ်ရိုးမသေသပ်အောင် လုပ်ပစ်တယ်၊ အဲဒီလိုနဲ.အဲဒီကုမ္မဏီဒေ၀ါလီခံသွား
ပါရောဗျာ၊ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား အပေးအယူမမျှတလျှင် ဘယ်လောက်ပဲအင်အားကြီးပါစေ
အလုပ်သမားပါမွှားများ စည်းလုံးညီညွှတ်လျှင် ဒင်းတို.ပြိုလဲသွားမည်မှာ ဧကန်မုချပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။
သူ့ဆန်စား ရဲမှ ဆိုတဲ့ စကားပုံလေး ကြားဖူးပါတယ်။
ကိုယ်မကျေနပ်ရင် ခေါင်းပုံဖြတ်တယ် ဂုတ်သွေးစုတ်တယ်ထင်ရင် အဲဒီအလုပ်ကို မလုပ်ရုံပေါ့။
ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ ရေးသားထားသလို အင်မတန်သေးသိမ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မြှောက်ထိုးပင့်ကော် လုပ်ခိုင်းခြင်းအားဖြင့် အလုပ်သမားထုကို ရုပ်ပိုင်းရော စိတ်ဓာတ်ရေးရာပိုင်းကိုပါ ပိုမိုနိမ့်ကျသွားစေနိုင်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
တဆက်တည်း ပြောရရင်ဖြင့် စာရေးဆရာအောင်သင်း ရေးထားတဲ့ သခင်စိတ်နဲ့ ကျွန်စိတ် ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေး ရှာဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
အန်တီမမရေ .. ဘယာကြော်ပါဗျို့ … ။
ရွှေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့သားနဲ့ … အလုပ်သမားတွေ တခြားနေရာကိုပြောင်းမရွေးချယ်ပဲ … တောင်းဆိုမှုတွေ လုပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ညှင်းပမ်းနေတာလို့ပဲ ထင်တယ် … ။ ဆန္ဒပြလို့ လိုက်လျောလျှင်တော့ဟုတ်တာပေါ့.. တစ်ခါထက် နှစ်ခါ ..စက်ရုံဘက်ကလည်း … ဘယ်လျော့ပါတော့မလဲလေ … ဒီတော့ .. အလုပ်ပျက်တယ် … လစာတွက်တဲ့အခါနစ်နာမယ် … မှီခိုနေမိသားစုတွေ ဒုက္ခရောက်ရမယ် … ။ လှိုင်သာယာမှာ ဆန္ဒပြတာကလေ .. အခုဆိုဖက်ရှင်တစ်ခုလိုပါပဲ … ။ လုပ်ခလစာ အပြည့်ဝမရလို့ .. တောင်းကြတာ … ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် .. ဒါပေမယ့် … ဒီအလုပ်က တိုးမပေးတော့ဘူး တင်းခံနေတယ်ဆို … (ကိုယ်လည်း မတန်ဘူးထင်လျှင်) တခြားအလုပ်ကို ပြောင်းရပါလိမ့်မယ် … ။
သီဟပူရ က ဟိုစကီလေး ဆိုတဲ့ သီချင်းပဲ ဆိုပြတော့မယ်…
အို ပြဿနာတွေ တက်၊ အို ပြဿနာတွေတက်၊ ခံစားချက်တွေ ကုန်ခန်းလို့ အို…
ပြဿနာတွေတက် …ရို့ …
shwe tallatrေ၇ ..ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း…. အလုပ်သမားမို့ … အလုပ်သမားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့… အခြေခံလစာ တိုးတောင်းတာကို လက်ခံပါတယ် ။ မလောက်ငှတာကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် … ဒီလို လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတွေရှိလို့သာ ကျွန်မတို့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတာပါ … ။ ကျွန်မတိုက လုပ်အားကိုမှီပြီး သူတို့ လုပ်ငန်း လည်ပတ်နေတယ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် …ကျွန်မတို့ကို ယုံကြည်စွာ ခန့်အပ်မှုမရှိလျှင် .. ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်တော်တော် … အလုပ်လုပ်ခွင့်မရပါဘူး … ။
အခြေခံလူတန်းစားထဲ ကတစ်ယောက်မို့ … ကျွန်မလည်း … လစာ ၊ အခွင့်ရေး .. ပိုလိုချင်ပါတယ် ။ များသည်ထက် များများ ပိုလိုချင်ပါတယ် .. ဖြစ်နိုင်တာ မဖြစ်နိုင်တာ အပထား … ကိုယ်က .. တစ်ကျပ်ဖိုးပဲ လုပ်တတ်ပေမယ့် .. တသိန်းဖိုးလောက် လိုချင်တဲ့ စိတ်ရှိသူပါ … ။ ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ … ။ ဘ၀ရပ်တည်ချက်အရ … ပိုက်ဆံပိုလိုချင်တယ် .. တိုးလိုချင်တယ် .. ဒါက လိုအပ်ချက်လေ … ။ ကိုယ်ကရော … ပိုက်ဆံ ပိုရလျှင် .. ရတဲ့အလျောက် ဘယ်လို ၀န်ဆောင်မှုမျိုး ပြန်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ ..တွေးရတော့ပါမယ် … ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ … ကျွန်မတို့ လုပ်နေတာ သူများ အလုပ်မို့လို့ပါပဲ … ။ သူများအ လုပ်လုပ်ပြီဆိုကတည်းက .. သူတို့ အလိုအကျ … တာဝန်ကျရာထမ်းရတာမျိုးပါ … ။ အကယ်၍များ … ကိုယ်က .. ဒီနေရာမှာ ဒီလို ခိုင်းတာ မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလျှင်၊ ဒီပမာဏလောက်နဲ့ မကျေနပ်လျှင် … … ပထမအဆင့်အနေနဲ့ … အလုပ်ရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးတောင်းဆိုသင့်တယ် … ။ ဒါကိုမှ သူ့ဘက်က မလိုက်လျောလျှင် … အလုပ်ထွက်ပြီး တခြား ပြောင်းရုံသာ ရှိပါတယ် … ။ မပေးမချင်း … တစာစာ ..သွားရပ်တောင်းလို့ကမရပါဘူး … ။ သူ့ဆီက ရစရာအကြွေးမရှိသလို … ကိုယ်လည်ချောင်းကွဲအောင်တောင်းတိုင်းလည်း .. (ကိုယ့်အမျိုးမဟုတ်လို့) ရမယ်မထင်ဘူး … ။
တစ်ချို့သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အားနည်းတဲ့စက်ရုံမျိုးသာ … အလုပ်သမားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက် မဖြည့်နိုင်လို့ ပြန်လစ်သွားခဲ့လျှင် …. အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သူဦးရေ .. တိုးလာပါလိမ့်မယ် .. ။ လူဦးရေ အားလုံးအတွက် တပြိုင်နက် အလုပ်ရဖို့ဆိုတာလည်း … မလွယ်ကူပါဘူး … ။စားဝတ်နေရေး အခက်ခဲဖြစ်ရပါလိမ့်မယ် … ။
ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ ဒီလို ပြသနာ ဖြစ်ရတာ အလုပ်ရှင် ၊ အလုပ်သမား စာချုပ်မရှိလို့ ဖြစ်ရတာလို့ မြင်မိပါတယ် ။
Etone လေးရေ ။
ကျန်တဲ့ စာရေးသူ စာဖတ်သူတွေ ဘယ်အသက်အရွယ်ရှိပြီဆိုတာ မသိပေမယ့် ။
အဘ က Etone ရဲ့ အသက်အရွယ် ကိုတော့ သိနေတော့ကာ ၊
ဒီ အသက်အရွယ်နှင့် ဒီလောက် ရင့်ကျက်တဲ့ အတွေးအခေါ် ရှိနေပြီး ၊
ဒီလို ပြောရဲနေတဲ့ သတ္တိ ရှိနေတဲ့အတွက် ၊
အဘ Etone လေးကို ချီးကျူး ပါရစေကွယ် ။
စာရေးသူ ” shwe tallatr ” ကိုပြောရရင်တော့ ၊
၁ ။ အသက်အရွယ် ကြောင့်သော် လည်းကောင်း ၊
၂ ။ မွန်းကျပ် ပိတ်လှောင် ခံနေရတဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ ကြောင့်သော် လည်းကောင်း ၊
ကို shwe tallatr တို့လို အယူအဆမျိုး
ငယ်ရွယ်စဉ်က ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ကွယ် ။
ရရင်ရ ၊ မရရင်ချ ပေါ့ကွယ် ။
၁ ။ အသက်အရွယ် ကြီးလို့ အတွေးအခေါ် ရင့်ကျက် လာတာက တကြောင်း ၊
၂ ။ ရာထူး အရလည်း Management Level ရောက်လာတော့
Bird Eye View လို့ ခေါ်ရမယ့် နှစ်ဖက်လုံးကို မျှမြင် လာတာက တကြောင်း ၊
အခုအချိန်မှာတော့ ၊ အဘ သဘောကို ပြောရရင် ၊
ကို shwe tallatr ရဲ့ total destruction
အလုံးစုံ ပျက်သုံးရေး ဆန်ဆန် အယူအဆကို ၊
စာနာတဲ့အထိ လက်ခံပါတယ် ၊
ဖျက်စီးမယ့် အပိုင်းကို လက်မခံတာပါ ။
အန်တီမမ ရဲ့ အဆို နဲ့ ၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာ တစ်ကယ်ဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့ မအိတုန် တို့ ရဲ့ အဆို ကို သဘောတူပါ၏ ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှေးကတဲက သူများလုပ်ရင်လိုက်လုပ်တဲ့ သောက်ကျင့်ဆိုးအား ရွံမိပါ၏
အခြေခံလူတန်းစားအလုပ်သမားတွေကို ဖိနှိပ်နေတာ တခြားနိုင်ငံက အလုပ်ရှင်တွေမဟုတ်ဘူး… ကိုယ့်နိုင်ငံက ကိုယ့်လူမျိုးအထက်လူကြီးတွေပဲ….
သူတို.က သူ.တို.ဘောစိ မျက်နှာရအောင် အောက်ကလူတွေဖိဖိပြီး အလုပ်တွေလုပ်ပြ နေတာ…
အဲဒီလို သောက်သုံးမကြတဲ့ အထက်လူမျိုးမြန်မာများကို ရှုံချရမှာ………..
အလုပ်သမားတွေကို သနားလို့ ထောက်ခံတာတော့
ဒင်းတိုပြိုလဲသွားရင် အောက်ကပိမှာ ဘယ်သူတွေဆိုတာသတိရအုံး..
ကို kyeemite ကိုလည်း ချီးကျူး ပါရစေကွယ် ။
အလုပ်သမားတွေ ကို လစာဖြတ်ခိုင်းလို. ဆိုပြီး
အလုပ်သမားတွေလစာ ဖြတ်တဲ့ Amount လောက်သက်သာလိမ့်မယ်ဆိုပြီး
စာရေးတင်ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထွက်စာတင်ခဲ့တယ်တဲ့ လေ……….
အလုပ်သမားတွေမှာ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးရှိသလို အလုပ်ရှင်တွေမှာလည်း အလုပ်ရှင်အခွင့်အရေး ရှိသင့်ပါတယ်။ တရားဥပဒေနဲ့အညီပဲဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
စကားပုံလေးတခုကြားဖူးပါတယ်။ သစ်တပင်ကောင်းငှက်တသောင်းနားနိုင်ဆိုတာလေ။ ဒီသစ်ပင်ကိုငှက်တွေကဖျက်ဆီးလို့သစ်ပင်သေသွားရင် ငှက်တွေလည်း နားခိုစရာမဲ့သွားနိုင်ပြီး ကာရာအိုကေတွေ အနှိပ်ခန်းတွေ ပိုစည်ကားလာမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ်ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်ဟာ ဘာဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတာ ကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့စဉ်းစာဖို့လိုပါတယ်။ အထည်ချုပ်ဆိုတာ အမျိုးသမီးအများစု အလုပ်ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်သမားပါမွှားများ စည်းလုံးညီညွှတ်လျှင် ဒင်းတို.ပြိုလဲသွားမည်မှာ ဧကန်မုချပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။…
မှန်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့စက်ရုံဒေ၀ါလီခံရပြီဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဘာဆက်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံနိုင်ခြေရှိတဲ့ အခြားစက်ရုံတွေဟာလည်းကြောက်လန့်ကုန်ပြီး ပြန်ကုန်ကြမယ်ဆိုရင်သစ်ပင်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ငှက်တွေလို ဖြစ်ကုန်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ မြန်မာရာဇ၀င်မှာလည်းအမဲစက်ထင်မှာစိုးမိပါတယ်။
ကြုံခဲ့ရဖူးတာကို ပြောပြမယ် ။
Location ကတော့ လှိုင်သာယာ ဇုံ (၂) မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာ ဆန်နီ ဖိနပ်ချုပ် စက်ရုံ ။
လုပ်ငန်းခွင် အထဲမှာ ကြီးကြပ်တဲ့ ကိုရီယား လူမျိုး အုပ်ချုပ်သူက တော်တော်ကို
အပြောဆိုးတယ်လို့နာမည်ကြီးတယ် ။ ဘယ်သူက အမှန်လည်းလို့ ပြောရတာလည်း
တော်တော် ခက်သားဗျ ။ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်း မတစ်ထောင်သားတွေကို အုပ်ချုပ်ဖူးတော့
တချို့ နေရာတွေမှာ ချိုချိုသာသာ ပြောလို့ မရတာတွေရှိတယ် ။ လက်ခုပ်ဆိုတာမျိုးက ၂ ဖက်တီးမှ
မြည်တာမျိုးလည်း ရှိတာပေါ့ ။ တခုသော နေ့ တွင် ပေါ့ဗျာ ။ အဆိုပါ အုပ်ချုပ်သူ ကိုရီးယားရဲ့အဆူအပြော
ကို မကြေနပ်တော့ အဆိုပါ သကောင့်သား တစ်ယောက်က သံ တစ်ချက်မှ မပါတဲ့ ဒီဇိုင်းတခုရဲ့ ဖိနပ်ခွာထဲကို
သံသုံးရတဲ့ ဖိနပ်ရဲ့ သံကို လက်ရာပိပိရိရိ သေသေသပ်သပ် ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါသတဲ့ ။
ဟုတ်ကဲ့….. Export လုပ်တာက ဂျပန်ကိုပါ ။ မောင်မင်းကြီးသားတို့စက်ရုံမှာ အစ ပထမက ဖိနပ်ရိုက်တဲ့ X-ray
စက်က မရှိဘူး ဗျ ။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ ဂျာပွန်ပြည်ကို ဖိနပ်တွေ ရောက်သွားပြီးတဲ့ နောက်မှာ X-ray စက်မှာ အဆိုပါ သံချောင်းက
ခန့် ခန့် ကြီး လဲလျောင်းတော် မူနေပါသတဲ့ ။ လျော်လိုက်ရတာ သိန်း ၃ ထောင်ကျော်လို့ဆိုပါတယ် ။
အဆိုပါ ကိုရီးယား အနေနဲ့ ကလည်း အသံကြောင့် ဖားသေလို့ ပဲ ပြောရမလား………..
ဟို သကောင့်သားကလည်း ကြွက်မနိုင်ကျီ မီးနဲ့ရှို့ တယ် ပြောရမလား………
နောက်ဆုံးတော့ …ရလာဒ်က ဘာလဲ ယုံကြည်မှု ဆိုတဲ့ (Trust) က ကင်းမဲ့သွားတယ် ။
ကျန်တဲ့ လူတွေပါ မိတ်ပျက်ကုန်ရော ။
ကျုပ်အမြင်ပြောရရင်တော့ ……ကျုပ်တို့ တတွေကို ကျုပ်တို့ နိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင် ဆိုသူတွေက
ထမင်းစားနိုင်လောက်တဲ့ အလုပ်တွေကို မပေးနိုင်သေးပါဘူး….။
တချို့ တချို့ သော စွန့် ဦး စိုက်ထုတ် (တကယ် စိုက်ရ မစိုက်ရ ဆိုတာတော့ သူတို့ တွေပဲ အသိဆုံး)
လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ အလုပ်အကိုင်လေးများ ပေးသနားနိုင်ကြပေမဲ့လည်း တနိုင်ငံလုံး အတိုင်း
အတာနဲ့ကြည့်မယ် ဆိုရင် ရပ်ကွက်တခုလုံး မြို့ နယ် တခုလုံး နီးပါးရဲ့မိသားစုဝင်တွေ အားလုံးကို
ထမင်းစားနိုင်လောက်တဲ့ အလုပ်ကို ပေးထားနိုင်တာ နိုင်ငံခြားသား လုပ်ငန်းရှင်တွေပါပဲ ။
အမြတ်ကြီးစားတယ် …သူတို့ အိပ်ထဲပဲ ထည့်တယ်လို့ပြောချင်ပါသလား ။
သေချာပေါက် မြတ်ဖို့ ကို စီးပွားရေး လာလုပ်ကြတာပါ ။ သေချာပေါက်ကို ဒီလုပ်ငန်း လည်ပတ်ဖို့ 
ပိုက်ဆံတွေကို သူတို့ ရဲ့အိပ်ထဲကနေ ထွက်လာခဲ့တာကြောင့် သူတို့ အိပ်ထဲကို ထည့်ဖို့ က ၉၀%
သေချာသလောက်ပဲ ။ ကိုယ်က လုပ်အားပေးလို့သူတို့ က ပိုက်ဆံပြန်ပေးတယ် ။ အလုပ်မှာ ချစ်တာခင်တာ
သနားတာ စေတနာထားတာ လုပ်ပေးခဲ့တာ ဆိုတဲ့ အကျိုးလိုလို့ညောင်ရေသွန်း အဆင်မျိုးတွေကို ခင်းတဲ့
ယဉ်ကျေးမှုကလည်း အမြစ်ကတွယ်နေတော့ ခက်တယ် ။ ငါ ဒီ သူဋ္ဌေး အပေါ်ကို ဘယ်လောက် စေတနာထားပြီး
လုပ်ပေးခဲ့တာ ဆိုတာမျိုး ပြောချင်တဲ့ ကိုအ၀ှာ ၊ မအ၀ှာများကို မေးလိုက်ချင်ပါတယ် ။ လုပ်အားပေးလို့ပိုက်ဆံရတာကို
ဘယ့်နှယ် စေတနာထားတယ် ဆိုတာကြီးကို အတင်းကာရောကို တင်သွင်းလာသလဲ ဆိုတာကိုပါ ။
စေတနာထားပြီး လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ကိုယ့်ဘာသာကို ဇွတ်ကြီး ခံယူထားပြီး အမြင်မကြည်တဲ့ အခါမျိုးကြရင်တော့
အဲဒီ စကားလုံးတွေ တွင်တွင်သုံးပြီး တောင်းကြဆိုကြ အော်ကြဟစ်ကြပေါ့ ။
ကုလားအုတ် ပုံပြင် ကြားဖူးကြလား ။
ကျုပ်ကတော့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့။
ကျုပ်အလုပ်မှာဗျာ…….စစချင်းတော့ မျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ ပေါ့ ။
သူတို့ တွေ တစ်အုပ်စု ( ၇ ယောက်) နေတဲ့ နေရာကို ဖယ်ရီ စီစဉ်ပေးဖို့အခက်အခဲ ရှိတာကြောင့်
အလုပ်ခန့် ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ အခါ…ရပါတယ် ဆရာရယ်….ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဖာသာ စက်ဘီးစီး
ပြီး အလုပ် အတက်အဆင်း လုပ်ပါမယ် တဲ့…..ဒီလို နဲ့ကျုပ်လည်း မနေနိုင်ပဲ မနက်ခင်း လာကြိုပေးဖို့ 
မဖြစ်နိုင်တောင်မှ ညနေခင်း အပြန်တော့ လိုက်ပို့ ပေးသင့်တယ် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ညနေခင်း အပြန်ကို စီစဉ်ပေးခဲ့တယ်။
ကာလကလေး နည်းနည်းကြာလာတော့ ကိုယ်တော်ချောတွေက ငြူစူလာပြီး မနက်ခင်း လာရတာ အခက်အခဲရှိတယ်…
ကယ်ရီခ ဘယ်လို ကုန်တယ်…….မနက် ဖယ်ရီ စီစဉ်ပေးရမယ် ……Camp မှာ နေအိပ်စား စားရိပ်ငြိမ်းချင်တယ် …..
မစီစဉ်ပေးရင် အလုပ်ထွက်မယ် …. ဘာညာနဲ့သူလျှို ဒလန်တွေ သုံးပြီး လေသံပစ်လာကြကရော……. ။
ကျုပ်ကတော့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အတွက် စဉ်းစားထားပြီးပါပြီ…….။
မောင်မင်းသားကြီးတွေကို ဓါးမိုးပြီး အလုပ်ခိုင်းထားတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်……
စိတ်ဆန္ဒ ရှိရင်ဖြင့် …… ထွက်တော်မူ နန်းက ခွာကြပါလို့ ……
ကို nigimi77 ရေ ။
မှန်ပါတယ်ဗျာ ။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ ။
( ရရင်တော့လည်း ကောင်းသော်ငြားလဲ )
” စေတနာ ” မလိုချင်ပါဘူး ။
” မိသားစုပုံစံ ဆက်ဆံရေး ” လည်း မလိုချင်ပါဘူး ။
ချစ် စရာလည်း မလိုဘူး ။ မုန်းလည်း သောက်ဂရု မစိုက်ဘူး ။
သောက်ဆံရဖို့ ၊ သောက်လုပ် လာလုပ်ကြချင်း ဖြစ်တယ် ။
စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ဥပဒေ နှင့် အညီပဲ အုပ်ချုပ်မယ် ။
ငါ့ကို ဆရာလည်း လာမတင် နှင့် တပည့်လည်းလာမခံ နှင့် ။
ကျောသားရင်သားလဲ မခွဲဘူး ။
ခွဲစရာရှိရင် ၊ အလုပ် ကြိုးစားတဲ့သူ နှင့် အလုပ် မကြိုးစားတဲ့သူ ပဲခွဲမယ် ။
ကိုယ့် သောက်လုပ် ကိုယ်လုပ်ကြပါ ။
ဒေါင်ဆို အလုပ်စတာမြင်ချင်တယ် ၊ ဒေါင်ဆို အလုပ်သိမ်းမယ် ။ ဒါပဲ ။
ဓါးမိုးပြီး မလုပ်မနေရ လုပ်ခိုင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး ။
မင်းကျေနပ်တယ် ဆိုပြီး လာလုပ်တာ ။
မလုပ်နိုင်ရင်ထွက် ။ ဒါပဲ ။
ဘာ ” စေတနာ ” ဘာ ” မိသားစုပုံစံ ဆက်ဆံရေး ” မှ မလိုချင်ဘူး ။
အေးးးး မင်းတို့တိုင်းပြည်က စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ဥပဒေ တွေက ၊
မင်းတို့ကို လုံလောက်အောင် အကာအကွယ် မပေးဘူး ထင်ရင်တော့ ၊
မင်းတို့ အစိုးရ နှင့် မင်းတို့ ရှင်းကြ ။ အလုပ်ရှင် နှင့် မဆိုင်ဘူး ။
မြတ်မယ်ထင်လို့ ၊ သာမယ်ထင်လို့ အလုပ်လာလုပ်တာ ။
အလှူလာပေးတာမှ မဟုတ်တာ ။
( အထူး မှတ်ချက် ။
အဘ တို့ သင်္ဘောလောကမှာတော့ ၊
နိုင်ငံတကာ စံ ဥပဒေ များကို လိုက်နာရတဲ့အတွက် ၊
အဲဒီ ဥပဒေ များက အလုပ်သမား သင်္ဘောသားများ၏ ၊
အကျိုးစီပွားများကို ရေပက်မဝင် ကာကွယ်ထားပြီးဖြစ်၏ ။
ဥပမာ ။ ။ Work Hour & Rest Hour Regulation
အဘတို့မှာ အခုမြန်မာပြည်မှာ ပြောပြောနေတဲ့
ILO ထက် အများကြီး ပိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ITF ရဲ့ Rule တွေကိုပါ
လိုက်နာနေရတာ ။ အဟင့် ။
ITF = International Transport-worker Federation
အလုပ်သမားများ တဦးကိုတဦး ဟန်ချက်ညီညီနဲ.လက်တွဲသွားနိုင်ကျပါစေလို.ဆုတောင်း